I-Semalt Expert: Indlela yokulwa nokuhlaselwa kwe-Cyber ​​Malicious
Ngeli-21 leminyaka, ukhuseleko lwewebhu kunye nezicelo zewebhu zibonakaliseibe yinkxalabo ephambili kwilizwe ledijithali. Zonke iinkampani ezibandakanyekayo ekwenzeni ishishini zisebenzisa iteknoloji zisengozini kule mngeni.Amanye amashishini asele anamaxhoba okuhlaselwa kwe-Cyber ​​kanti abanye baqhubeka beqhuba kwiindawo ezizimeleyo ezisekhompyutheni ezipheleleyobahlaseli.
uFrank Abagnale, uMphathi weMatriki oPhumeleleyo weMatriki Semalt IiNkonzo zeDivithali, ijolise ukuqaphela amashishini e-intanethi malunga nokuthintela ukuhlaselwa kwe-Cyber ​​kwezicelo zabo zewebhu okanye iiwebhsayithi. Ukongezelela,Iingcebiso ezibalulekileyo ukuba inkampani ikwazi ukuyenza ekuphuculeni amanyathelo abo okukhuseleko nazo zigqityiwe. Kule nxu lumanisoukuqonda ukuba iinkampani ezinkulu nakwiinkqubo zinokuthi zithinteke ngokukhwabanisa. Ngokomzekelo, u-Zamota waqhekeka ekuqaleni konyaka,kunye nolwazi lwayo oluyimfihlo kunye nolwazi oluyimfihlo kunye nolwazi lwabasebenzisi basebenzise kakubi ngabagculi. Ngoko unokukhusela njani iwebhusayithi yakho kwi-Cyber ​​Attacks?
Ukuqala, sebenzisa izicelo ezihlaziyiweyo kunye nesofthiwe. Phantse bonke abanikazi bezabelo banakhobeva ngeMagento, Joomla, ne-WordPress enokukhethwa kokuhlaziya okufuna ukucofa iqhosha lokukhuphela okanye ukufakelaiiplagi kunye neenguqulelo. Kule nkalo, abaphuhlisi bewebhu kunye nabasebenzisi bayalumkisa ngokukhetha ama-plugin aphantsi ahlawuliweyo kuba abahlaseli banakobaye babadala ngamabomu bajolise ekugodleni iiwebhusayithi. I-CMS (i-Content Management Systems) kuluntu olufana neWP (WordPress) kunyeUMagento uye wa sebenza ngokukhawuleza ukukhusela indawo. Ukongezelela, ezi ziqonga ziqhubeka nokukhupha iinkqubo zokukhusela rhoqo ezenzayoiiwebhsayithi ezinamandla ngokukhuselekileyo kwi-intanethi..Enye yezona ndawo zikhuselekileyo zithatha ulawulo. Nangona kunjalo, amashishini ase-intanethi acetyiswa ukubaukusebenzisa isisombululo sokusingatha. Inkampani yokubamba iqaphele ukulungiswa kwezokhuseleko ngexesha usebenzisa ipakethe. Ngaloo ndlela, amashishini anokuhlala ehlalabahlale bekhuselekile kwi-Hacking.
Ukukhuselwa kwephasiwedi kunye nesilumkiso yisinyathelo sesibini seleko kwiwebhusayithi. I-intanethiAbasebenzisi kufuneka badale kwaye bagcine iiphasiwedi ezinamandla ezenziwe ngabantu abakhethiweyo, ii-alphabet, kunye neenombolo ukuze kungabikho mntu onokuyichitha ngokulula.Kwiphepha elifanayo, abanikazi bewebhu kunye nabasebenzisi bangakwazi ukufaka iimveliso ezinxulumene neGoogle ezithintela ukweba amaphasiwedi kwezinye i-intanethiizicelo zewebhu okanye amasayithi. Ngokomzekelo, isiphequluli se-Chrome sinikeza isongezo esibizwa ngokuthi "Iphasiwedi Alert", engayilanda kwayeefakwe ngokukhululekile malunga nomatshini ngamnye.
Okwesithathu, sebenzisa izixhobo kwisayithi ekhusela i-DDoS (Ukuhanjiswa kweNkonzo yeNkonzo).I-DDoS yindlela yokuhlaselwa ngabahlaseli kunye nabagaxekile ukuba bathumele i-intakeko ye-intanethi kwiwebhusayithi ethize ngoko kungenakufumaneka.Inani elikhulu lezithuthi ezenza indawo ayitholakali ithunyelwe kwiindawo ezininzi. Eyona nto ingumngcipheko kuzo zonke iinkqubojikelele kwi-HIV echaphazelekayo kunye neTrojans kunye nabahlaseli bajolise kwinkqubo enye ngexesha. I-Google inemveliso ebizwa ngeGoogleI-Shield Project ukukhusela iiwebhusayithi ezintsha kwi-DDoS ukuhlaselwa kakubi. Inkonzo ifumaneka ngokusetyenziswa kwamahhala ngamagumbi amancinci e-intanethi,izitsha ezintsha kunye neengxelo zeendaba ezizimeleyo.
Ekugqibeleni, sebenzisa iseva yokusingatha kwiwebhu. Iseva ezinikezelweyo ikhuselekile ngakumbikunokuba isebenzisi yewebhu ibanjelwe ngewebhu kunye neendawo eziliqela ngelo xesha. Ithintela umnini wesayithi kubahlaseli abanobungozi basebenzisa ubungoziesinye isayithi ukuhlawula ezinye iiwebhusayithi ezithathiweyo kumncedisi. Cinga ukusebenzisa i-web hosting iinkonzo ezibonelela izicelo zewebhu zomliloiiseva zokusingatha.